About Us - Ningbo WEDAC Point pamusoro Sale Ratidza Co., Ltd
NBN-zvizorwa muchiso mu Australia
TD Ratidza Hwokutengesa kuti Vitamin Box
Automatic Self-kufurira System kuratidzira
Price chitaridzi pedhi nokuda haka
PVC kadhi mapedhi
Jekiseni kuumbwa Part
Drug kuzvidzora otomatiki Hwokutengesa ratidza
Make-up kuzvidzora otomatiki Hwokutengesa ratidza
Ningbo WEDAC Point pamusoro Sale Ratidza Co., Ltd. ari mugadziri nyanzvi design, kukura uye kubudisa chitoro amatura vanoratidza zvokushandisa siyana nzvimbo kusanganisira zvizorwa, utano Ande-mudzanga Mazinga. Yaiva Ningbo pamusoro Zhejiang dunhu, tiri pedyo yakakurumbira yakadzika-mvura chengarava-Beilun chengarava, kubatsirwa yaro yakakodzera chokufambisa Network.
Aiming pane kupa mumwe-vanorega basa akaratidza zvokushandisa, isu kazhinji pfungwa kugadzira uye kubudirira. zvigadzirwa edu kunosanganisira kusanganisira chitoro chitoro pasherefu Hwokutengesa & mugoveri vanoratidza hurongwa, POP / Pos hurongwa, vanoratidza zvizorwa, Supermarket / chitoro vanoratidza cabinet / pani / bhokisi, acrylic vanoratidza, akatungamirira vanoratidza, signage, Supermarket DIY kuratidzwa zviumbu & negadziriso etc. Also pezvakaitwa zvedu munzvimbo iyi inosanganisira acrylic nhema basa simbi (cNC vachipfugama, punching, Laser nokuveza), epurasitiki jekiseni uye yemapuranga basa.
Zvichakadai, tiri zvikuru kwenyanzvi acrylic zvigadzirwa mugadziri mu China. Zvichitevera mutemo yepamusoro wokutanga, mainjiniya vedu vane ruzivo munzvimbo iyi anopfuura 10 makore wakadzikwa uye rakatangwa kunyatsoomerera yepamusoro utariri hurongwa uyewo kushandisa chaiyo artcraft kugutsa chaiwo wandei.
Vanobatisisa mubhizimisi muuzivi takunda zvisamumirira pamwe, pragmatism uye utsanzi kudzingana zvakaisvonaka, WEDAC Rakakwanira kupa nyanzvi design, yepamusoro zvinhu uye aifungawo basa. Makore 10, zvinhu zvedu zvave aivigirwa kuna Australia, Japan, USA uye nyika dzokuEurope uye zvatakabatira zvirongwa zvakawanda kwemakungwa nemakasitoma kubva munzvimbo dzakasiyana. WEDAC achida kumisa mudiwa ukama vatengi vari pamba uye kunze, uye anorenda kusika chikonzero chikuru.
tiri mugadziri nyanzvi design, kukura uye kubudisa chitoro amatura vanoratidza zvokushandisa siyana nzvimbo kusanganisira zvizorwa, utano Ande-mudzanga Mazinga.
Gadzirisa Product Your